कथाघर कविता-यात्रा शब्द-सिर्जना मातृका पोखरेल
ए.अ.ने.ज.सा.महासंघ प्रलेस, नेपाल
तेजनारायण - मातृका पोखरेल Posted by
म नास्तिक थिएँ - मातृका पोखरेल Posted by
श्राप - मातृका पोखरेल Posted by
रिठ्ठेको त अब दिन फिरेजस्तो छ नि ! सुन्तलीले पँधेरामा गाग्रो बिसाउँदै भनी ।
आ ..... काकी पनि के को दिन फिर्नु नि ! बिचरो रिठ्ठेको छोरो मर्न लागेको सासमात्रको छ । मुखियाको जन्मिने बित्तिकैको छोरो वर्षीको जत्रो छ । बराबरी भाग्य भए अहिले किन फरक भयो ? निर्मलाले ओँठ लेप्र्याउँदै जवाफ दिई ।
यी पढेका मान्छेहरू सबै यस्तै हुन्छन् । भाग्य जन्मदै लिएर आउनुपर्छ, पछिपछि हेर्दै जा न । काकीको कुरामा सही थाप्दै तल्लाघरे खत्रिनीले भनिन् ।
यो विषयमा पँधेरामा हिजा–आज निकै बेर कुरा चलेछ ।
मुखिया बा र उसको छोरो एकैदिन, उही समयमा जन्मेको कारण रिठ्ठे हिजोआज निकै खुसी देखिन्थ्यो । मुखिया वा गाउँका ठूला ज्योतिष पनि थिए । उसले मनमनै सोच्यो – छोराको भाग्य सोध्न मुखिया बाकहाँ जानुपर्ला ।
हिँड्ने बेलामा श्रीमतीले भनी – सुत्केरी भएको यतिका दिनसम्म पनि राम्रो खानेकुरा मुखमा हाल्न पाइनँ । मेरो जिउ काम नलाग्ने भो ।
उसले श्रीमतीको कुरा सुनेको नसुन्यै ग¥यो ।
ऊ एकाबिहानै मुखियाको घरमा पुग्यो । भोलि हुने न्वारनको चहलपहल त्यो घरमा देखिन थालेको थियो । कोठाहरूमा भोलिका लागि मिठाई वा अन्य परिकारहरू बनाइरहेका मान्छेहरू सलबलाइरहेका देखिन्थे । आँगनमा भोलिका लागि काट्न ल्याइएका खसीहरू बाँधिएका थिए । मुखिया बरण्डामा बसेर नयाँ पाहुनाहरूसँग भेटघाट र कुराकानीमा तल्लीन थिए । बरण्डाबाट मुखियाले उसलाई देख्नेबित्तिकै तल आँगनमा ओर्लिए र भने – तँ बेलैमा आइपुगिस, राम्रै भयो । तेरो पनि केही काम छ कि ?
छोराको भाग्य सोध्न – प्रसन्न मुद्रामा उसले कड्किएर भन्यो । सधैंभरि झुकेर मात्र कुरा गर्ने मानिसले आज कसरी ठाडठाडै कुरा ग¥यो । मुखिया अचम्ममा परे ।
हजुरको छोरो र मेरो छोरो एउटै साइतमा जन्मिए । मेरो छोराको भाग्य पनि हजुरको छोराको जस्तै हुनुपर्छ । हजुरको छोराको भाग्य कस्तो छ ? उसले एकै सासमा आफ्ना कुरा सिध्यायो ।
धत् पाजी ! कहीँ तेरो र मेरो छोरो एउटै साइतमा जन्मछन् ? रिसाहा अनुहार लगाएर मुखियाले उसलाई भने ।
हो हजुर ! गाउँका सबै देख्नेहरूलाई थाहा छ । पुरेतलाई पनि थाहा छ । पुरेतले भोलि हजुरको छोराको र मेरो छोराको एउटै नाउँ जुराउँदैछन् । उसले खितिति हाँस्दै भनेको सुन्दा मुखियालाई लाग्थ्यो – ऊ गर्वको चरम सीमामा छ ।
मुखिया बा एकछिन अलमल्ल परे ।
एउटै साइताँ जन्मने बित्तिकै भाग्य उही हुन्छ भन्ने छैन । हेर रिठ्ठे ...... पुर्खाले गरेको कर्मको फल पनि सन्तानलाई मिल्छ । मुखियाको भनाईले उसलाई कतै अन्तर्मनमा झिरले घोचिरहेझैं लाग्यो ।
एकछिन मुखिया बाले घोत्लिएर भने – भोलि छोराको न्वारान छ, दिनभरि तैले यहाँ आएर सघाइदिनु पर्छ । बरू भोलि बिहान चाहिँ चाँडै आउनू नि !
हजुरले के कुरा गर्नुभा, मेरो छोराको पनि भोलि न्वारान छ नि । अत्यासलाग्दो पाराले उसले कुरा गर्‍यो ।
मुखियाको रिस चढ्दै गयो । उनले विचार गरे – अब यस्लाई अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्नुपर्ला ।
हेर, तेरो घरजग्गा मेरो नाममै छ । तैंले वर्षेनी व्याजमात्र बुझाइस् । अब साउँको भाका पनि नाघिसक्यो । बेलामा काम देलास् भनेर मैले तेरो मुख हेरिदिएको हुँ । जे गर्छस् ..... नत्र त्यो घरबारी भोलिदेखि नै छाडिदिनू ।
मेरो घरबारी हजुरको नाममा कसरी ? रिठ्ठेको अनुहारमा एकाएक अँध्यारोको छाया देखियो । उसले आफ्नो भविष्य ऐना फुटेझैं चकनाचुर भएर त्यही अगाडि फुटेको महसुस ग¥यो । उसले एकछिन कुनै कुरा सोच्नै सकेन ।
यहाँ कानून अनुसार काम हुन्छ । जा आफैं बुझ । मुखिया शहरबाट आएका पाहुनाहरूसित कुरा गर्न माथि चढे ।
मुखिया साहेब म कानून सानून केही जान्दिन । लर्बरिएको स्वरमा मुखियाले सुन्ने गरी उसले भन्यो ।
रिठ्ठेले अलि वर आएर पछि फर्किएर हे¥यो । मुखियाको छोराको न्वारानको चहलपहल ! आउने मान्छेहरूको ओइरो । बाटाभरि उसले सोचिरह्यो – आफ्नो र आफ्नो छोराको भाग्य ।